Maamullaha Kastanka Borama Oo Dakhliga Kasoo Xarooday Kastamka Ku Maal Geliya Xisbiga WADDANI,Iyo Eedaymo Culus Oo Loo Jeediyay
Sunday June 11, 2017 - 11:57:38 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Barmaamush keeney waxaan doonaayaa in kagga hadlo, sheekadda ka taaggan dallalka caraabta ee khaliijka , isla markaana dadka somaliland u iftiimiyo u jeedadda loo saarrey qadder cunaqabteenta.
Mowduuca ugu mihimsan ee aan doonaayo in aan ka haddlo waa khilaafka isoo korraya ee u dheexya, (QADAR dhinac ah iyoSUCUUDIGA IYO EMRAADKA IYO BAHREN IYO MASAR OO DHINAC AH); Waxaad og tihiin in maalin kasta wax cudubi soo kordhayo, shaley ayeey aheed markii sucuuddigu soo saareen iyaga iyo xulufadoodu, Baaq aay_ 59 qafiyo iyo HAAYADOOD ay ku calaaminayaan, LEENKA u horeeya waxaa ku jira; SHEEKH YUSUF ALQARDAAWI;lakain waxaan aragnaa (XAMAAS IYO AL JIHAAD ) aaney ku jirin waraaqdaasi, ama liiskaasi,
Ma hubno bari iyo saandambe sidey wax u dhaci doonaan, waxaan seh og nahey xaallada dhaqaalaha ee dalka qader ku soo kordhaya, kadib markii la xidhey air boodh yadda, haawada, iyo dhulka aay la leedahey waddamada aay is qabteen, waxaa kale oo aaynu og nahey safiiradihii u dhalatey dalka gader ee ku sugneeyn dallaalkaas aay is qabteen, in lagu yidhi mudo kooban hakaga baxaan, hadii kale la saari doono ganaax lacageed oo farra bada, taas macaneehduna uu yahey qafwaloo kagga baxi waaya dalalkaas una dhashey waddanka Qader la ganaaxi doono lacag dhan 500.000 milyan, ama nu bilyan doler, taas hadii aay diidaana la xidhi doono dhamantood, taasina waa waxa hadda dhacaya.
Anigu waxaan arkaa shaqsi ahaaan in waddamada guud dallalka khaliijkiii carrabata ee ku sugan dalka sucdiigu in gudoomiyahoogu uu soosaaro go,aan dalka QADER ka saaraya dallalka waddamada khariijka, RUNTI waxaa halkaas ka muuqda waa go,aan xumo aay seefta galka ugga saareen dallaka collaada xun qaadey qader, waxeeyna u qaateen in dalka QADER is dhiibi doonto isla markaana calnka cad taaggi doonto, kadiib markey saraan cuno qabeentaas iyo culeeskaas intaas leeg,
Waxaan wadda ogsoonahey dowladda gader oo heeysta quwaad dhaaqaale oo fara badan isla markaana aay lacag dhan maliyiin doler aay keed u yihiin, isla markaana xidhiidh weynna la leh waddamda calaamka sida turkiga iyo iran, wax raad oo weyn kuma sameenaayo cuna qabateen tooda aay sareen, mana gaadh siin karo meel aay is dhiibto.
Cid kastoo aragta wajiga amiirka kuwet, uu la kulmiyey boqrka sucudigga, iyo ka emrraadka iyo ka QADER , wey cadeed inuu si weyn ugu fashilmey dhexdhexaadintii uu ka waddey waddamda khaliijka, dhex dhexaadiintii la wadey wey dhacdey, liiskii arrga gixso ee la soo saareyna waxuu noqdey mid aan soconeyn, liiskana waxaa ku qornaa sagal iyo hayadood ama shaqsiyaada(59).
Cunna qabeeyn tii dalka qader la saareyna waa mid soo koreeysa oo waji cusub yeelata waagi baryaba, kolahiii waddamada carrabtuna waxaad moodaa inuu yahey mid labba qabeed u kala jabey, iyadoo.
QADER, QUEET IYO SATALADA CUMAAN, ay dhinac isku raaceen, ( sucuudiga emraadka iyo bhareen iyo masarna aay dhanka kale isku raaceen,) markaa ma garan karno waxa dhici doona arintu ma tahey wax isoo taraaya, ilaa aay ka gaadho iska hormiaad dagaal iyo ciidan ama adeegsi diyaraad iyo duqeeyn lagu qaado dalka QADER.
DHibaatdan ka taggan dalalka carabta waa israac qabiileeysan , oo isla markaana aan wax xidhiidha la laheen argagaxisadda, waxa jirra boqrtooyadda sucudigu iney daneeynso ama ay rabto ineey noqto caqiilkii qabiilooyinka khaliijka, taas oo macnaheedu yahey sucuudigu inuu rabo inuu noqdo hogaamiye aan lagga daba hadlin ee gollaha khaliijka carrabta. khilaafkani waa mid u muuqda iska hormiaad qabiileysan, tusaale ahaan markaan ka tusaalo qaddano, bayaankii aay soo sareen qoska qader ee madhabta mahaabiga taas buu ka cadhoodey sucdigu, dhanka kale turkigaa cidmado iyo taagiyo ku difaacayo u direy qader.
waan soo wadda war wraar kale
waxaa qorey fuaad maxamed qawdhan arimaha bulshada woowliwch london